सोसलमिडियामा आउने बिषयलाई पनि मुलधारका संचारमाध्यमले प्रयोग गर्न थालेका छन्-सुनिल न्यौपाने - MeroReport
सोसलमिडियामा आउने बिषयलाई पनि मुलधारका संचारमाध्यमले प्रयोग गर्न थालेका छन्-सुनिल न्यौपाने
सुनिल न्यौपाने उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा सम्पादकको रुपमा काम गर्छन । लामो समय पत्रकारितामा खर्चिइसकेका सुनिल पछिल्लो केही महिना यता ब्लगिङमा समेत उत्तिकै जमेर लागिरहेका छन् । ब्लगिङ गर्न थालेको केही महिनामै उनका केही ब्लगपोष्टहरु चर्चित समेत भइसकेका छन् । 'यात्रा' नाम दिएर ब्लगिङ थालेका सुनिलले आफ्नो ब्लगको चिनारीमै लेखेका छन्-'आखिर यात्रा नै त हो जीवन सपनाको पछि लागिरहने' । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा हामीले यसहप्ता उनै शुनिलसंग भलाकुसारी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ प्रकाश लामिछानेले गरेको कुराकानी :
ब्लग लेखन कहिलेदेखि शुरू गर्नुभयो? धेरै भएको छैन । पहिलो व्लग सन् २०११ मा बनाएको थिएँ । मलेसियामा अनलाईन संचालनकाबारेमा ज्ञान हासिल गर्न एउटा तालिममा गएको अवसरमा त्यहिँका एकजना प्रशिक्षकले व्लग बनाउन सिकाएका थिए । त्यो तालिमका दौरान बनाएपनि धेरै चलाइएन । नियमित चलाउन भनें गएको दशैं देखि मात्रै थालेको हो । तर अहिले चलाएको व्लग पहिलेको होइन नयाँ हो ।
आफ्ना भावना, बिचार र अनुभूति पोख्ने सवैभन्दा गतिलो माध्यम हो व्लग । त्यसैका लागि लेख्छु ।
यात्रामा देखिएका, भोगेका कुरा लेख्न मनपर्छ । त्यसैले मैले मेरो व्लगको नाम पनि त्यहि अनुसार राखेको छु ।
तपाइँ त मुलधारको पत्रकिरता पनि गर्नुहुन्छ, सोसल मिडियामा आफुलाइ कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ एउटा ब्लगरका रुपमा या पत्रकारका रुपमा?
सोसल मिडियामा म आफुलाई व्लगरकै रुपमा मात्रै चिनाउन चाहन्छु । केहि साथीले पत्रकारका रुपमा जवाफ अपेक्षा गरेर कुराकानी गर्नुहुन्छ । तर पनि मलाई आफुलाई त्यो परिचय उति रुचिकर लाग्दैन सोसल मिडियामा ।
म त एकदमै नयाँ हुँ यस क्षेत्रमा, त्यसैले म भर्खर सिक्दै छु । अरुका व्लगहरु पढ्छु, रमाईलो लाग्छ । केहि व्लगहरु धेरै रुचिकर छन् जसले फुर्सदको समयमा राम्रो ज्ञान र शिल्प सिकाउँछन् ।
त्यस्तो खासै त छैन । पछिल्लो पोष्ट एउटा यात्रा संस्मरणलाई धेरै साथीले मन पराउनु भयो । एउटा दैनिक पत्रिकाले त्यसलाई छाप्यो र केहि साप्ताहिक पत्रिकामा पनि छापेका छन् साथीहरुले । त्यसले अर्को संस्मरण लेख्न प्रेरित गरेको छ।
मुलधारको मिडिया मार्फत पत्रकारिता पनि गरिरहनुभएको छ, नेपालका मिडियाले उठाउने बहस र सामाजिक संजालमा हुने बहस उस्तै छन् कि भिन्न?
मुलधारका संचार माध्यमको दायित्व धेरै हुन्छ । समाजको हरेक बर्ग र समुदायले आफ्ना कुरा आफुले ठाने जसरी नै अपेक्षा गर्छ जुन सम्भव हुन्न । मुलधारको संचार माध्यमका आफ्नै सीमा पनि हुन्छन् । तर सामाजिक संजालहरुमा त्यो सीमा हुन्न । पछिल्लो समयमा हेर्दा नेपालका मुलधारका संचारमाध्यममा छुटेका बिषय पर्याप्त रुपमा सोसल मिडियामा बहसमा आए झैं लाग्छ ।
मानिसहरु अचेल सामाजिक संजालमा हुने बहसमा निकै सहभागी भैरहेका हुन्छन, आमसंचारमाध्यमले यस्ता बहसलाइ स्थान नदिँदा कतै बैकल्पिक मिडियाको खोजी गर्दै त्यता बहसहरु गरमागरम भैरहेको त हैन?
पछिल्लो समयमा राम्रा बहसलाई मुलधारका संचारमाध्यमले पनि पछ्याउन थालेका छन् । राम्रा ट्विट वाफेसबुकका भित्तामा पोखिएका बिचारलाई पनि स्थान दिन थालिएको छ, यो सकारात्मक पाटो हो । तर मैले अघि पनि भनें मुलधारका संचारमाध्यमका आफ्नै सीमा हुन्छन् तर हरेकका अपेक्षा आ–आफ्नै । त्यसैले सवैका अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैनन् मुलधारका संचारमाध्यमले । सायद त्यसैले आफुलाई रुची लागेको कुरा स्वच्छन्द रुपमा व्यक्त गर्न सोसल मिडियामा पहुँच भएका व्यक्तिहरु लागेको हुनुपर्छ ।
सोसल मिडियामा हुने यस्ता बहसले मुलधारका मिडियालाइ सहयोग गर्छ, फरक पार्दैन या अब मुलधारका मिडियाले बिषयबस्तुका बारेमा सोच्न जरुरी छ? के लाग्छ यहाँलाइ?
पछिल्लो समयमा सोसल मिडियामा धेरै राम्रा बहस हुन थालेका छन् जसले मुलधारको पत्रकारितालाई सहयोग नै गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ । भनिन्छ नी, हाँसले पानीबाट छानेर दुध खान्छ । बिस्तारै सोसल मिडियामा आउने बिषयलाई पनि मुलधारका संचार माध्यमले त्यसरी नै छानेर आफुलाई काम लाग्ने अंश प्रयोग गर्न थालेका छन् । मुलधारको संचार माध्यम भनेको पनि त्यहि समाजका लागि हो । त्यहि समाजको एउटा बर्गले उठाएका बिषयलाई पूरै आँखा चिम्लेर म आफ्नै बाटोमा ठिक छु भनेर हिंड्ने प्रयास गरिएमा जसले त्यसो गर्छ उहि पछि पर्ने हो । यो कुरालाई मुलधारको संचार माध्यमको नेतृत्व गरिरहेकाहरुले बुझेका छन् भन्ने लाग्छ ।
मेरो पछिल्लो यात्रा संस्मरण सवैभन्दा धेरैले हेर्नु भएको छ जुन उदयपुरबाट सुरु भएर खोटाङमा पुगेर पहिलो अध्याय अन्त्य भएको छ । एकै दिन सवैभन्दा धेरैले पढेको भनेको चाहिं एमाले नेता केपी ओलीका व्यङ्ग्य संगालो हो । त्यो मैले अर्को एउटा व्लगबाट साभार गरेको थिएँ ।
अरुको ब्लग कत्तिको हेर्नुहुन्छ?
फुर्सदको समयमा केहि व्लग हेर्छु । झण्डै पाँच सातवटा छन् ।
कसरी पुग्नुहुन्छ अरुको ब्लगसम्म?
केहि व्लग बेला बेलामा हेरिरहन्छु, कुनै नयाँ सामग्री पोष्ट गरिएको छ की भनेर । अनी ट्वीटरमा आउने लिंकका आधारमा पनि केहि व्लग हेरिन्छ । केहि चैं सोसल मिडियामा चर्चामा आएपछि हेरिन्छ ।
यो त आफ्नो रुचीमा आधारित कुरा हो । सवैले आफ्ना रुची अनुकुलका सामग्री खोज्छन् र जवाफ दिनेले पनि आफु अनुकुल दिने जवाफ हो भन्ने लाग्छ । जस्तो मैले लेखेका व्लग केहि साथीले मन पराएर पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुभयो, कसैका लागि त्यो झर्कोलाग्दो कुरा हुनसक्छ । मुख्य कुरा बजारमा उपलव्ध सामग्री भन्दा फरक र धेरै मान्छेलाई के कुरा आवश्यक पर्छ त्यसैलाई समातेर व्लग लेखिएमा धेरैको ध्यान तान्छ होला ।
पेशागत कुराहरु वा पेशागत बहसहरु गर्न कत्तिको मन पराउनुहुन्छ ब्लगमा?
त्यस्तो खासै छैन । मेरो आफ्नै व्लगमा त अहिलेसम्म पोष्ट गरिएका सामग्री पनि थोरै छन् जसमध्ये झन थोरै बिषय मात्रै यसमा परेका छन् ।
मुख्य कुरा त यसले एउटा नयाँ बर्ग तयार गर्छ । चलाउँदै जाँदा शुभचिन्तक पनि भेटिन्छन्, कडा आलोचक पनि । आफ्नो रुची मिल्नेहरु भेटिन्छन् जसले नयाँ सम्वन्ध बिस्तार गर्छ । सामाजिक संजालकै माध्यमबाट समुह निर्माण गर्दै केहि साथीहरुले अत्यन्त सहयोगी काम गर्नुभएको छ । आफ्नो परिचयको दायरालाई फराकिलो बनाउन पनि सामाजिक संजाल उत्तिकै सहयोगी भएका छन् ।
तपाइको विचारमा सामाजिक संजाल के हो? सुचना र समाचार आदानप्रदान गर्ने थलो, बिचारहरु अभिब्यक्त मञ्च, विज्ञापनको माध्यम या अल्टरनेटिभ मिडिया, के हो? मुख्य कुरा त हरेक व्यक्तिले आफ्ना बिचार र भावना प्रकट गर्ने थलो नै हो । सामाजिक संजालमा लेखिएका बिषयमा आउने टिप्पणीले पनि जनमत बुझ्न र कतिपय बिषयमा नयाँ दृष्टिकोण थाहा पाउन सकिन्छ । कतिपय संस्थाका लागि सामाजिक संजाल बिज्ञापनको राम्रो माध्यम बनेका छन् । त्यसैले सदुपयोग गर्न सकेमा सामाजिक संजालले बिज्ञापनमा पनि ठूलो सहयोग गर्न सक्छन् । हुन त केहि समययता सामाजिक संजालको प्रयोग खासगरी शहरमा तिब्र गतिमा बढेको छ । शहरमा चलेको हावाको झोंक्का अहिले ग्रामिण क्षेत्रमा समेत पुग्न थालिसकेको छ । तर पनि मलाई अहिले नै सामाजिक संजाल मुलधारको संचारमाध्यमको बिकल्प बनिहालेको वा त्यो बाटोमा अघि बढिहालेको छ भन्ने लाग्दैन।
पक्कै छ । मुख्य कुरा मुलधारको पत्रकारिता ‘के भयो र कसरी भयो’ केन्द्रीत हुन्छ भनें व्लग बिषय प्रतिको आफ्नो बुझाई केन्द्रीत हुन्छ । मुलधारको पत्रकारितामा कुनै पनि कुरा प्रकाशन, प्रशारणमा आउनु पूर्व बिभिन्न चरण पार गरिएको हुन्छ । त्यसमा प्राप्त बिषय र तथ्य तथ्याङ्कलाई अध्ययन-अनुसन्धान गरी सामग्री तयार पारिन्छ र त्यसलाई हेर्ने अन्य निकाय पनि हुन्छन् । तर व्लग मार्फत गरिने नागरिक पत्रकारितामा सवै काम एकैव्यक्तिले गर्छ । उसले जस्तो देख्छ त्यहि लेख्छ । तर कहिले काहिं बिषयलाई हेर्ने र त्यसलाई बुझ्ने कुरामा त्यसको दोश्रो पाटो हेरिएन भनें त्यसले निम्त्याउने समस्या ठूलो हुन्छ । हुन त व्लग हेरिने र पढिने क्रम अझै पनि नेपालमा केहि व्लग बाहेक धेरैको त्यति धेरै छैन । तर त्यसो भन्दैमा गल्तीक्षम्य हुन्छ भन्ने होईन । बिषयका हिसावले व्लगहरुमा बिबिधता छ । त्यसले समाचार देखि बहस र टिप्पणीसम्मलाई उठाएपनि त्यसको प्रस्तुतीका हिसावले भनें अझै पनि आश्वस्त हुन सकिन्न ।
हुन त यो त्यति सहज बिषय होईन । तर सामाजिक संजालहरुमा पछिल्लो समयमा जुन रुपमा बिषयहरु पोखिन्छन् त्यसमध्ये कतिपय कुराले यसको आवश्यकता देखाउँछ । फेसबुक, ट्वीटर वा व्यक्तिगत व्लग स्वच्छन्द अभिव्यक्तिका लागि उपयुक्त ठाउँ हुन् । तर कतिपय अवस्थामा त्यो स्वच्छन्दताको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । त्यसैले यसतर्फ व्यक्ति स्वयं नै सचेत हुनुपर्छ ।
मेरोरिपोर्टले छोटै समयमा जुन प्रगति गरेको छ त्यो सह्रानिय कुरा हो । यसले अत्यावश्यक सामग्रीको जुन रुपमा संग्रह गरिदिएको छ त्यो सवैभन्दा स्वागतयोग्य कुरा हो । मेरोरिपोर्टको टीमले न्यू मिडियाको प्रयोगमा जुन रुपमा जागरुकता बढाईरहेको छ त्यसलाई साधुवाद र अन्त्यमा मेरो रिपोर्टको अझ धेरै प्रगतिको शुभकामना ।
Comment by Binod Dhakal on January 5, 2013 at 7:23am
बधाई छ सर
Comment by Pagal Basti on January 4, 2013 at 1:26pm
badhaai6hai hamro pani
Comment by Amuna Chapagain on January 2, 2013 at 5:19pm
Comment by sherbhhadur bhujel on January 2, 2013 at 3:56pm
ल है सुनिल सरलाई धेरै धेरै बधाई छ । कृष्ण सर पछि तपाई पाले आएछ अब पालो सुफलजीको होला जस्तो छ ।
Comment by Indra Dhoj Kshetri on January 2, 2013 at 3:48pm
लु बधाई छ बन्धु । :)
Comment by Krishna Guragain on January 2, 2013 at 3:28pm
ल बधाई छ है :)